ဝန်ဆောင်မှု | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
Toggle search Toggle location Toggle coupon
Drecome isaplatform where clients, who want to promote their stores, can use the service for free. It enables them to promote their stores to local customers as well as visitors from overseas.
ကိတ်မုန့်  /ပေါင်မုန့်
© Drecome All Rights Reserved.
Dagon Botataung Ahlon Sanchaung Hlaing Kamayut Mayangone Bahan Latha Lanmadaw
Ahlon Bahan Botataung Dagon Dagon Seikkan Dawbon Hlaing Hlaingthaya Hlegu Hmawbi Insein Kamayut Kyauktada Kyimyintdaing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taungnyunt Mingaladon North Dagon North Okkalapa Pazundaung Pabedan Sanchaung Shwepyitha Seikkan South Okkalapa South Dagon Thaketa Tamwe Thanlyin Thingangyun Yankin Yangon Other
Mandalay District Meiktila District Nyaung-U District Pyinoolwin District
Dekkhinathiri Ottarathiri Pyinmana Zabuthiri
မြန်မာအစားစာ တရုတ် အစားစာ ၈ျပန် အစားစာ ကိုရီးယား အစားစာ အိန္ဒိယ အစားစာ အီတာလီလျံ အစားစာ အနောက်တိုင်း အစားစာ ထိုင်း အစားစာ အခြား အစားစာ စင်ကာပူအစားအစာ ဟာလာ ကဖီး ဘား မလေးရှား အစားအစာ ဗီယက်နမ် အစားအစာ မြေထဲပင်လယ် အစားစာ သတ်သတ်လွတ် အစားစာ ကိတ်မုန့်  /ပေါင်မုန့် အချိူပွဲ ဘူဖေး
ထမင်း နှင့်ဟင်းလျာ ရှမ်း အစားစာ ဟော့ပေါ့ ရာမန် ဆူရှီ ရှာဘူ ရှာဘူ ဒင်းဆန်း အီတလီစတိုင်ခေါက်ဆွဲ ပီဇာ အချိူပွဲ မုန့်ဟင်းခါး ရိုးရာမုန့် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ရခိုင်ရိုးရာမုန့် ငါးကချင်ချက် ဘဲကင် ငါးအစိမ်းလွှာ ဘူဂိုဂီ ဒံပေါက် ဒိုဆာ စင်ကာပူစတိုင်ဟင်းပွဲ မလေးရှားစတိုင်ဟင်းပွဲ ဗီယက်နမ်စတိုင်ဟင်းပွဲ ဟမ်ဘာဂါ ဟင်းချို တုံယမ်း ဟင်းချို ယမကာ ဟင်းပွဲအသေး အသုပ် ပေါင်မုန့် သစ်သီးဖျော်ရည် ပင်လယ်စာ အအေး တောပို့ကီ ထမင်းကြော် အချိူပွဲ စမူသီ အသားညှပ် ပေါင်မုန့် အသားကင် ရေခဲမုန့်  တွဲဆက်ထားသော ဟင်းပွဲ မုန့် အချိူပွဲ အမဲကင်ဆိုင် ကြေးအိုး
ခရစ်ဒစ်ကတ် ဗီဇာကတ် မာစတာကတ် ယူနီယန် ကတ် ဂျေစီဘီ ကတ်
တရုတ်ဘာသာ ဂျပန် ဘာသာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ
တရုတ် ဂျပန် အင်္ဂလိပ်
အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ ပေးသည်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့် သီးသန့်အခန်း ပြင်ပ သို့ယူဆောင်သွားနိုင်သည်။ ဘီဝိုင်အိုဘီ အားကစား တီဗွီ ကားရပ်ထားရန်နေရာ အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့် လေအေးပေးစက် မသန်စွမ်းလူများကိုထောက်ပံ့ခြင်း တီးဝိုင်း
စုံတွဲ အဖွဲ့လိုက်၊ပါတီ ကလေး နိုင်ငံခြားမှလာရောက်လည်ပတ်သူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိူးသား အမျိူးသမီး ဇိမ်ခံပစ္စည်း သင်တင့်သောဈေးနှုန်း
ရည်ရွယ်ချက်၊အရည်အသွေး ဖြင့် ရှာဖွေမှု